20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika, Maanta iyo Obiang Mbaso & Idriss Deby – Q:6aad – Tusmoonline.com
20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika, Maanta iyo Obiang Mbaso & Idriss Deby – Q:6aad
Dhacdooyinka Wararka	December 20, 2016	139	Like
Obiang Mbasogo – Equatorial Guinea (1979-Illaa Imika)
Madaxweynaha wadanka Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo waxa uu noqday madaxweynaha isna ugu xukunka dheer madaxdii xukunka qaaradda Afrika soo martay maadaama ay isku wakhti yihiin Madaxweynaha wadanka Angola Dos Santos oo ay xukunka dalalkooda hayaan illaa 1979 waa muddo 36 sanadood ah. Kala badh dadka reer Equatorial Guinea waxa ay ku dhasheen isaga oo ninkani xukunka dalkaasi haya. Maadaama dhallinyarada dalkaasi yihiin shacabka inta ugu badan waligood may arag madaxweyne aan isaga ahayn oo dalkooda xukumaya. Waxa uu xukunka dalkiisa ka boobay adeerkii Francisco Macías Nguema isaga oo wakhtigaasi 1979 ku qabsaday inqilaab Milatari oo dhiig badani ku daatay.
Mudada xilkiisa: 36 sanadood+
Waxa uu ku ladan yahay iyada oo shacabka Equatorial Guinea ay intooda badan ku shaqeeyaan shidaalka maadaama dalkoodu ka mid yahay dalalka shidaalka soo saara. Warbaahinta wadanka Equatorial Guinea waxa ay ugu yeedhaan Ilaahii waddanka taasi oo laga garan karo heerka ay gaadhsiisan tahay awoodda kali-talisnimo ee ninkani dalkiisa ku haysto illaa ay gaadhsiiyeen heer uu dadka oo dhan ka sarreeyo. Ma jiro cid xisaabisa awooddisa. Waxa uu doono ayuu ka qaataa dalkiisa dhaqaale ahaan. Waxa uu gacanta ku hayaa awoodda ciidanka oo ah kuwo aad u arxan daran. Dadka oo dhan waa uu laayaa ciddii ka hor timaad mana ogola cid mucaarid ah. Dilka, dhaca, boobka hantida dadweynaha iyo afduubka dadka siyaasadda u dhaqdhaqaaqaa waa arrin dabiici ah dalka Equatorial Guinea. Gabi ahaan lama ogola wax axsaab ah. Doorashooyina hadalkooda daa. Xabsiyada ayaa dadka lagu jidh dilaa. Wargeyska Forbes waxa uu hantida Madaxweyne Nguema Mbasogo ku sheegay in ay cagacagaynayso in ka badan $600 oo milyan oo dollar.
Idriss Deby – Waddanka Chad (1990-Illaa Maanta)
Innaga oo wali ku guda jirna qormadeenii aan ku eegaynay 20-ka Hogaamiye ee kalidood taliyayaasha ah ee soo maray qaaradda Afrika waxa kaalinta 12aad ku jira liiskan Madaxweynaha wadanka Chad ee badhtamaha qaaradda Afrika ee wakhtigan dalkaasi maamula kaasi oo la sheego in uu ka mid yahay kali-taliyayaasha qaaradda soo maray kuwooda ugu madax adag. Idriss Deby waxa uu Bishii December 1990-kii talada dalkaasi kula wareegay inqilaab dhiig ku daatay isaga oo xukunka dalkaasi ka tuuray Madaxweynihii xilka uga horreeyey Hissene Habre oo isaga laftiisu ahaa kalidii taliye macangag ah oo aan qormooyinkeenii hore ku soo qaadanay. Idriss Deby waxa uu gacan ka helayay wakhtigaasi dalalka Libya iyo Sudan waxaanu wakhtigaa hogaaminayay jabhaddii dhaqdhaqaaqa xornimo doonta dalka Chad ee PSM.
Muddada xilkiisa: 25 sanaddood+
Xukunkiisa: Idriss Deby mudadii uu xukunka dalkiisa hayay waxa tiraba dhawr jeer ku kacay kacdoono hubaysan oo la doonayay in xukunka lagaga rido balse dhammaantood waa uu ka guulaystay iyada oo dhiig badani ku daatay. Idriss Deby waxa lagu tilmaamaa nin macangag ah oo aan nixin kaasi oo sida uu doono ugu takri fala awoodda uu gacanta ku hayo isaga oo isku darsaday gacan adayg iyo muddo xileedkiisa oo dheer maadaama uu dalkaasi xukumayay illaa hadda 25 sanadood sidoo kalena aanu ogolayn in uu talada dalkaasi wareejiyo ama tartan xor iyo xalaal ah dalkiisa ugu horseedo doorashooyin ay dadku ku soo doortan cidda ay rabaan. Idriss Deby waxa uu isku hubsaday awoodda ciidamadisa isaga oo dhegta dhiigga u dara cid kasta oo uu u arko in ay xukunkiisa lid ku tahay gaar ahaan ciidamada waxa uu aad uga taxadaraa inqilaab milatari sidaa darteed saraakiisha u daacadda ah ayuu xilalka ugu sarreeya u dhiibaa isaga oo aad isaga ilaalinaya inqilaab milatari. Sannadkii 2006 ururka caalamiga ah ee qiimeeya musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida adduunku waxa uu Idriss Deby ku tilmaamay madaxweynaha adduunka ugu musuqmaasuq badan. Abaaraha iyo gaajada dalkiisa ka jirta hadana waxa uu ninkani ka ganacsadaa hubka iyo hantida dalkaasi isaga oo jeebkiisa ku rita lacagaha uu doono.